सुन दाँत / ग्रिल - Popular Jewelry
आइपिकनिक ग्रिल १ 1980 s० को दशकमा हिप-हिपको नयाँ वर्षहरूमा देखा पर्‍यो। गहना उद्योगले यसको विधिहरूमा क्रमिक सुधार गरेपछि यटेरियरको धेरै सरल डिजाइन जटिलतामा विकसित भएको छ। Years० बर्षको लागि, Popular Jewelry अनुकूलन गहना डिजाइन को अग्रभाग मा छ; ग्रिल अपवाद थिएन। एकल क्यापबाट मुखको सुन र हीरा— Popular Jewelry ती सबैलाई बनाउनुभएको छ।
हाम्रो कस्टम ग्रिलहरू - हामीबाट एक शब्द।
चेतावनीको रूपमा: यी ती पातलो, जेनेरिक, एक साइज-फिट-सबै प्रकारका ग्रिलहरू होइनन् — तिनीहरू अर्डर गर्नका लागि बनेका छन्; कस्टम पहिरिनको लागि अनुकूलित। तिनीहरू फिट हुनेछ मात्र ग्राहक तिनीहरू डिजाइन गरिएको थियो। क्राइम शो एपिसोड कहिल्यै देखेको छ जहाँ उनीहरू हराएको व्यक्तिको डेन्टल रेकर्डको लागि शरीरको दन्त प्रोफाइल मिलान गर्ने प्रयास गर्छन्? ठीक छ, एक प्रयास गरिएको र साँचो विधि बाहिर जान्छ; एक व्यक्तिको दन्त प्रोफाइल उसको वा उनीको डीएनए जस्तै अद्वितीय छ। उदारता र गुणको नाममा, हामी हाम्रो ग्रिल्स घन र टिकाऊ बनाउँदछौं तिनीहरूलाई हाम्रो प्रतिस्पर्धाको भन्दा फरक पार्न। यदि तपाईं आफ्नो भाँच्ने गधा मित्रहरूलाई त्यो चम्किलो मुस्कान उधार दिनुहुन्छ भने, सम्भावना यो छ कि तिनीहरू यसको सट्टामा एउटा गन्ध फ्राउनको साथ समाप्त हुनेछन् - कि दन्त चिकित्सकको बिलबाट तिनीहरूले दाँतहरू मर्मत गरे उनीहरूले तपाईंको ग्रिलमा जबरजस्ती गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए। सबै क्वालिटी क्राफ्ट गरिएको निजीकृत गहनाहरू जस्ता, अनुकूलन ग्रिलहरू अधिक ध्यान र विस्तृत कलाको लागि बनाइन्छ। हाम्रो ग्रिलहरू १$० डलर (एकल सादा चाँदीको क्याप्स) मा सुरू हुन्छ र त्यहाँबाट माथि जान्छ। दाँत ठीक गरी राख्नुहोस्। यहाँ बिचौलिया बिना। गर्वसाथ न्यु योर्कमा बनाइएको।
हामीसँग तपाईंको अर्डर राख्दा आवश्यक जानकारी र विचारहरू।
१) माथिल्लो वा तल्लो दाँत? (शीर्ष / तल)
२) कति र कुन दाँत? (Incisors, Canines, Moilers)
)) कुन प्रकारको बहुमूल्य धातु? (स्टर्लिंग सिल्वर, गोल्ड (१० के, १K के, १K के), प्लेटिनम)
)) कस्तो प्रकारको रंग? (गुलाब, सेतो, पहेंलो)
)) कस्तो प्रकारको फिनिश? (पोलिश, म्याट, आदि)
)) डिजाइन विवरणहरू? (पूर्ण / खुला अनुहार / Gap / आदि)
)) के तपाईं तिनीहरूमा जवाहरातहरू सेट गर्न चाहनुहुन्छ?
कुन प्रकार र रंग?
)) यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, कृपया तपाईं ड्रई / / स्केच / चित्र / छवि बुझाउनुहोस् ताकि तपाईं कस्तो प्रकारको डिजाईन जाँदै हुनुहुन्छ।
)) के तपाईं निकट भविष्यमा दाँतमा कुनै दन्त काम गरेको योजनामा ​​हुनुहुन्छ (यसले उनीहरू पछि फिट हुने तरिकालाई असर गर्न सक्छ)। हामी कुनै पेंडिंग / चलिरहेको दन्त प्रक्रियाहरू सिफारिश गर्दछौं कि ग्रिल अर्डर राख्नु अघि तपाईको ग्रिलिजको लामो अवधिको फिट सुनिश्चित गर्नका लागि।
हरियो हीरा कस्टम ग्रिल
ठोस तल आठ-दांत लेजर उत्कीर्ण ग्रिल
एक क्याप खुला सञ्झ्याल
शीर्ष पूर्ण-छह दाँत सादा ग्रिल (पहेलो सुन / सेतो सुन)
पूर्ण सेट ठोस सादा ग्रिल
आइस्ड-आउट ठूलो ग्याप w / फ्रेम्स (सेतो हीरा; Pav P Stonesetting)
आइस्ड-आउट क्याप्स (सेतो हीरा; Pavé Stonesetting)
अनुकूलन उत्कीर्णन ("दानव" को लागी कांजी वर्ण)
अनुकूलन कुँदिएका कुराहरु (भांग पात)
अनुकूलन कुँदिएका कुराहरु (प्लेबय बनी)
कस्टम हीरा डिजाइन (क्रस)
हीरा धूलो / फ्रेम प Open्क्ति खोल्नुहोस्
पूर्ण रूपले बाढी (ढुong्गा चल्ने ढु ;्गा; गुलाब सुन र गुलाबी नीलमणि)
आइस्ड-आउट खुला फ्रेमहरू
हीरा-काट खुला फ्रेमहरू
हीरा धुलो (दुई-टोन)
क्लासिक पालिश फ्याs्गहरू
ड्रिप (केवल प row्क्ति प row्क्ति)
हीरा धुलो (रजत)
आइस्ड-आउट बार (च्यानल स्टोनसेटिंग; २ पows्क्तिहरू)